I-TC TG HDL-C LDL-C-Igazi leLipid ekhawulezayo yeReagent Kit-Indawo yoVavanyo loKhathalelo-lweSinocare
I-TC TG HDL-C LDL-C-Igazi leLipid Rapid Reagent Kit
[imeyile ikhuselwe] I-Blood Lipid Reagent Kit (TC / TG ​​/ HDL-C / LDL-C) yenzelwe ukumisela ngokweendidi iintlobo ezine zegazi lipid (iyonke i-cholesterol TC, triglyceride TG, high-density lipoprotein cholesterol HDL-C, low-density lipoprotein cholesterol I-LDL-C) kwi-serum yomntu. Ngokwezonyango, isetyenziswa ikakhulu njengoncedo ekuchongeni isifo sehypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, isifo sentliziyo kunye ne-atherosclerosis.
I-cholesterol iyonke (TC) luphawu olubalulekileyo lwezonyango. Inqanaba eliphezulu i-TC inokukhokelela kwi-atherosclerosis, i-cerebral thrombosis, isifo seswekile, isifo sentliziyo, izifo zesibindi kunye ne-biliary system, njl.
I-Triglyceride (TG) ayilinganisi nje kuphela kwi-TC, amanqanaba omzimba kunye neswekile yegazi, kodwa ikwahambelana kakhulu nokutyeba. Inqanaba eliphezulu le-TG linokukhokelela kwi-hyperlipidemia. Ukuphakama kwe-TG kunxulumene nezifo ezinjenge-atherosclerosis. Ke, ukufunyanwa kwe-TG kubaluleke kakhulu kuthintelo kunye nokuchongwa kwesifo seswekile, i-nephropathy, isithintelo se-bile kunye nezinye iingxaki ze-endocrine ezinxulumene ne-lipid metabolism.
Ubuninzi be-lipoprotein cholesterol (i-HDL-C) inceda ukulungelelanisa inkqubo yokuhambisa uthutho lwe-cholesterol, i-anti-oxide, i-antithrombotic, anti-inflammatory, kwaye ichaphazela ukusebenza kwe-vascular endothelial, zonke eziba nefuthe elihle kuthintelo lwesifo sentliziyo. Njengobonakaliso obalulekileyo bokubeka iliso kwinqanaba lepidid yegazi, i-HDL-C inentsingiselo ekhethekileyo kukhetho lweziyobisi kunye noqikelelo lwesifo sentliziyo kunye nonyango lwe-atherosclerosis.
Ubuninzi be-lipoprotein cholesterol (LDL-C) ikwabizwa ngokuba yi-atherogenic factor. I-LDL-C ibonakalisa inqanaba elisezantsi le-lipoprotein cholesterol, umlinganiso ophakamileyo ungaphezulu kwe-TC, umngcipheko ophezulu kukufumana i-atherosclerosis. Ukuchongwa ngokuchanekileyo kwe-LDL-C kubaluleke kakhulu kuthintelo lwamanqanaba okuqala, ukufumanisa isifo, unyango kunye nokujonga isiphumo sokunyanga isifo sentliziyo. I-LDL-C sisiseko esisisiseko sokukhokelela ekusebenziseni iziyobisi kwizigulana ze-hypercholesterolemia.
I-TC / TG ​​/ HDL-C / LDL-C
I kZ Mitha / L
I-HDL-C: 0.2 ~ 3.9 mmol / L